Audio extractor: Olee otú Wepụ Audio si Video
> Resource> Video> Audio extractor: Olee otú Wepụ Audio si Video
Ị nwere video ahụ na-agụnye oké soundtrack na ị ga-amasị wepụ ya mere na ị pụrụ ige ntị na ya site na iji Media ọkpụkpọ - a obere MP3 ọkpụkpọ, maka ihe atụ. Na ike a dị mfe ọrụ ọ bụrụ na ị na-eji ndị ọkachamara video edezi software- Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Nnọọ na-eso a ndu wepụ audio si video na ala.
1 Import video faịlụ
Wụnye na-agba ọsọ a Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor). Wee pịa "Import" button aka ịchọta na tinye gị lekwasịrị video. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe video ka usoro ihe omume. The kwajuru video ga-depụtara na media n'ọbá akwụkwọ dị ka ndị na-esonụ foto na-egosi.
2 Malite adịrị audio si video
Mgbe importing video ka Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), ịdọrọ video si media n'ọbá akwụkwọ na video usoro iheomume. Ị nwere ike mgbe ahụ nri pịa video clip ma họrọ "Audio ikwụpu" wepụ audio si video. Mgbe a mgbe, video na ọdịyo ga-egosipụta dị iche iche egwu. Ọ bụrụ na ị na-achọghị na-video faịlụ, nri pịa ya na-ahọrọ "Hichapụ" na-ewepụ ya si video usoro iheomume.
3 Dezie ọdịyo ma ọ bụrụ na ị na-amasị
Mgbe ahụ Ugboro abụọ pịa dezie audio na mmapụta elu window. Ebe i nwere ike ịgbanwe Mpịakọta, ichabo na, ichabo si, na Ẹtop, wdg ka amasị gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ akụkụ nke audio, dị nnọọ etinye cursor ebe ị ga-achọ nhichapụ na-amalite na pịa "Split" button n'elu usoro iheomume. Njedebe nke nhichapụ ebe a na-akara N'otu aka ahụ --egwu ọdịyo na họrọ ikpeazụ n'ókè nke ebe na-ekwe si mmepụta audio, wee pịa "Split" button ọzọ. E wezụga nke ahụ, ị nwekwara ike ịgbakwunye ihe oyiyi ọhụrụ amịpụtara ọdịyo. A bụ zuru ezu ndu banyere ya >>
4 Zọpụta ọdịyo faịlụ
Mgbe ahụ, pịa "Mepụta" button mbupụ ọdịyo track. Ebe a dị iche iche nhọrọ na-nyere. Ka ihe atụ, i nwere ike ịzọpụta ọdịyo na mgbe formats dị ka MP3, MP4, WMV, AVI na na na "Format" taabụ na ịgbanwe ntọala dị ka Encoder, Sample ọnụego, Bit ọnụego na ọwa na-amasị gị. Ma ọ bụ mbupụ ya maka playback on obere ngwaọrụ, ọkụ ya na-DVD diski ma ọ bụ ịkọrọ ya YouTube ozugbo. Nanị họrọ a na-achọsi ike mmepụta usoro wee pịa "Mepụta" button ịzọpụta audio track.
DVD Ada Ada Alternative
Olee otú Mee Animated Christmas kaadị na Photos